शीर्षकमा बाइबल पदहरू: बाइबलमा राक्षस -> रहस्य
रहस्य: [बाइबलमा राक्षस]
हामीहरू किन त्‍यहाँ जानु र? हामीलाई डर लाग्‍छ। हामीले पठाएका मानिसहरूले त्‍यहाँका मानिसहरू हामीहरूभन्दा बलिया र अग्‍ला छन् अनि तिनीहरू आकाश छुने पर्खालले घेरेका सहरहरूमा बास गर्छन् भन्‍ने समाचार ल्‍याए। त्‍यहाँ तिनीहरूले दैँत्‍यहरूजस्‍ता देखे रे!’
(ओग रपाईहरूका अन्‍तिम राजा थिए। तिनको पलङ्ग ढुङ्गाले बनिएको थियो। तोकिएको नापअनुसार त्‍यो चार मिटर लामो अनि प्राय: दुई मिटर चौडा थियो। त्‍यो अझसम्‍म अम्‍मोनी सहर रब्‍बामा देख्‍न सकिन्‍छ।)
ती दिनमा र यसपछि पनि पृथ्‍वीमा मानवका छोरीहरू र परमेश्‍वरका छोराहरूबाट जन्‍मेका सन्‍तान शूरवीरहरूजस्‍ता थिए। तिनीहरू उहिलेका शूरवीर र नाम चलेका मानिसहरू थिए।
पृथ्‍वीमाथि आकाशभन्दा उच्‍चमा आफ्‍नो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले त्‍यो बनाउनुभएको हो, तलका मानिसहरू फटेङ्ग्राजस्‍ता छन्। बास बस्‍नलाई पाल टाँगेजस्‍तो वा पर्दा टाँगेजस्‍तो उहाँले आकाशलाई टाँग्‍नुभयो।
अब बुझ्‍यौ? विश्‍वासले मात्रै होइन तर उसले गरेको कामद्वारा मानिस परमेश्‍वरको अघि ठीक ठहरिन्‍छ।
त्‍यही समयमा यहोशूले गएर अनाकी भनिने दैँत्‍यहरूजस्‍ताका वंशलाई नाश पारे। ती दैँत्‍यहरूजस्‍ता पहाडी देशमा, हेब्रोन, दबीर, अनाब र यहूदा र इस्राएलका सारा पहाडी इलाकामा बस्‍थे। यहोशूले तिनीहरू र तिनका सहरहरू पूरा ध्‍वंस पारे।
आफ्‍नो अधिकारदेखि बाहिर रही आफ्‍नो वासस्‍थान पनि छोडेर हिँड्‍ने स्‍वर्गदूतहरूलाई समेत उहाँले न्‍यायको दिनमा सजाय दिन कहिल्‍यै नफुत्किने गरी बाँध्‍नुभएको छ र अन्‍धकारमा थुन्‍नुभएको छ।
 तिनीहरू एश्‍कोलको बेसीमा पुगे र त्‍यहाँ अङ्‌गुरको एक झुप्‍पा भएको एउटा हाँगा काटे। ती अङ्‌गुर अत्‍यन्‍त गह्रौँ भएको हुनाले एउटा घोचा लाएर दुई जनाले त्‍यो हाँगा बोके। तिनीहरूले केही अनार र नेभाराका फल पनि ल्‍याए। (त्‍यस ठाउँको नाम एश्‍कोलको बेँसी राखियो किनभने त्‍यहाँ इस्राएलीहरूले अङ्‌गुरको त्‍यो झुप्‍पा काटेका थिए।) चालीस दिनसम्‍म त्‍यस देशको भेद लिएर जासूसहरू फर्के। तिनीहरू पारानको बनमा मोशा, हारून र इस्राएलका सारा समुदाय बसेका कादेश भन्‍ने ठाउँमा आए। तिनीहरूले आफूले देखेका सबै कुरा तिनीहरूलाई सुनाए र ल्‍याएका फलहरू देखाए। तिनीहरूले मोशालाई भने, “हामीले त्‍यो देश घुमेर खोजी गर्‍यौं, देश धनी र मलिलो छ, त्‍यसका केही फलहरू यहाँ छन्। तर त्‍यहाँ बास गर्ने मानिसहरू बलवान् छन् र तिनीहरूका सहरहरू ठूला-ठूला पर्खाल र किल्‍लाले सुरक्षित गरिएका छन्। त्‍यस बाहेक त्‍यहाँ हामीहरूले अनाकका सन्‍तान देख्‍यौं। देशको दक्षिण भागमा अमालेकीहरू बस्‍छन्, हित्ती, यबूसी र एमोरीहरू पहाडमा बस्‍छन्। अनि कनानीहरूचाहिँ भूमध्‍य सागरको नजिक र यर्दन नदीको किनारमा बस्‍दा रहेछन्।” मोशाको विरुद्धमा कुरा गर्न मानिसहरूलाई चुप गराएर कालेबले भने, “हामीहरूले तुरुन्‍तै हमला गरेर त्‍यो देश लिनुपर्छ। हामीमा त्‍यो देश जित्‍ने शक्ति छ।” तर कालेबसित जाने अरू मानिसहरूले भने, “होइन, तिनीहरूमाथि हमला गर्ने शक्ति हामीसित छैन। त्‍यहाँका मानिसहरू हामीभन्दा शक्तिमान् रहेछन्।” यसरी तिनीहरूले आफूले खोजी गरी आएका देशको बारेमा इस्राएलीहरूका माझमा झूटा वर्णन दिए। तिनीहरूले भने, “त्‍यस देशमा त्‍यहाँ बस्‍ने मानिसहरूलाई खान पुग्‍ने गरी अन्‍न-पानी उब्‍जँदैन। हामीले त्‍यहाँ देखेका मानिसहरू सबै अग्‍ला-अग्‍ला थिए। अनि त्‍यहाँ हामीले दैँत्‍यहरूजस्‍ता पनि देख्‍यौं, तिनीहरू अनाकका सन्‍तान रहेछन्। हामी आफैंलाई त फट्याङ्ग्राजस्‍ता साना पो लाग्‍यो। तिनीहरूका नजरमा हामीहरू सायद फट्याङ्ग्राजस्‍तै देखिन्‍थ्‍यौं।”
मलाई चारैतिर घेरेर बसेका हजारौं शत्रुहरूदेखि म डराउँदिनँ।
त्‍यो जनावर पहिले जिउँदो थियो तर अहिलेचाहिँ छैन। त्‍यो गहिरो भड्खालाबाट निस्‍कनेछ र नष्‍ट हुनेछ। संसारको सृष्‍टि पहिले जीवनको पुस्‍तकमा नाउँ नलेखिएका संसारका मानिसहरूले त्‍यो जनावर देखेर अचम्‍म मान्‍नेछन् किनभने त्‍यो जिउँदो थियो, अहिले मरेको छ। तर त्‍यो फेरि देखापर्नेछ।
पापले आफ्‍नो कमारालाई दिने ज्‍यालाचाहिँ मृत्‍यु हो, तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टमा अजम्‍मरी जीवन जिउनुचाहिँ सित्तैमा दिइने परमेश्‍वरको दान हो।
 “हे मेरा प्रजा, मैले तिमीहरूकै खातिर एमोरीहरूलाई पूरा नाश गरेको थिएँ। ती एमोरीहरू देवदारुका रूखहरूझैँ अग्‍ला र फलाँटका रूखहरूझैँ बलिया थिए तर मैले तिनीहरूलाई टुप्‍पादेखि जरैसम्‍म नाश पारें। मैले तिमीहरूलाई मिश्रदेशबाट निकाली ल्‍याएँ, चालीस वर्षसम्‍म उजाड-स्‍थानको बीचबाट डोर्‍याएँ र एमोरीहरूको देश तिमीहरूको निज देश बनाउनलाई दिएँ।
 (एमी भनिने एउटा शक्तिशाली अग्‍ला वंश आरमा बस्‍थे। अर्को अग्‍ला वंश अनाकीहरूजस्‍तै तिनीहरू अग्‍ला-अग्‍ला थिए। अनाकीजस्‍तै तिनीहरूलाई रपाई पनि भनिन्‍थ्‍यो तर मोआबीहरूले तिनीहरूलाई एमी भन्‍दथे। होरीहरू एदोममा बस्‍ने गर्थे तर एसावको पुर्खाहरूले तिनीहरूलाई खेदे, तिनीहरूका जातिलाई नाश पारे र आफैं त्‍यहाँ बसोबास गर्न लागे। ठीक त्‍यसरी नै पछिबाट इस्राएलीहरूले परमप्रभुले तिनीहरूलाई दिनुभएको देशबाट आफ्‍ना शत्रुहरूलाई खेदे।) “त्‍यसपछि हामीलाई परमप्रभुले भन्‍नुभएअनुसार हामीले जेरेद नदी पार गर्‍यौं। हामीले कादेश-बर्ने छोडेको अठ्‌तीस वर्षपछि यो भएको हो। परमप्रभुले भन्‍नुभएअनुसार त्‍यस पुस्‍ताका सबै लडाकू मानिसहरू मरिसकेका थिए। तिनीहरू सबै नाश नभइञ्‍जेल परमप्रभुको हात तिनीहरूका विरुद्धमा उठेको थियो। “तिनीहरू सबै मरिसकेपछि परमप्रभुले हामीलाई भन्‍नुभयो, ‘आज तिमीहरू मोआब देशको बीचबाट आर सहर भएर जानुपर्नेछ। तब तिमीहरू लोतका सन्‍तान अम्‍मोनीहरूका देशको छेउमा पुग्‍नेछौ। तिमीहरूले तिनीहरूलाई नचलाउनू वा तिनीहरूसित लडाइँ सुरु नगर्नू किनभने मैले तिनीहरूलाई दिएको कुनै पनि जग्‍गा-जमिन म तिमीहरूलाई दिनेछैनँ’।” (यो देशलाई रपाईहरूको देश पनि भनिन्‍थ्‍यो। त्‍यहाँका बासिन्‍दाहरूको नामै रपाई थियो। अम्‍मोनीहरूले तिनीहरूलाई जमजुम्‍मी भन्‍दथे। तिनीहरू अनाकीहरूजस्‍तै अग्‍ला थिए। तिनीहरूको सङ्‍ख्‍या धेरै थियो र तिनीहरू एउटा शक्तिशाली जाति थिए। तर परमप्रभुले तिनीहरूलाई नाश पार्नुभयो र अम्‍मोनीहरूले तिनीहरूको देश जितेर त्‍यहाँ बसोबास गर्न लागे।
 जब मानिसहरू सारा संसारभरि फैलिदैगए र तिनका छोरीहरू जन्‍मे, परमेश्‍वरका कोही-कोही छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्‍दरी देखे र आफूलाई मन परेकाहरूलाई बिहे गर्न लगे। तब परमप्रभुले भन्‍नुभयो, “म मानिसहरूलाई सधैँभरि बाँच्‍न दिनेछैनँ, तिनीहरू मर्नुपर्छ। अबदेखि उसो, कोही पनि १२० वर्षभन्दा बढ्ता बाँच्‍नेछैन।” ती दिनमा र यसपछि पनि पृथ्‍वीमा मानवका छोरीहरू र परमेश्‍वरका छोराहरूबाट जन्‍मेका सन्‍तान शूरवीरहरूजस्‍ता थिए। तिनीहरू उहिलेका शूरवीर र नाम चलेका मानिसहरू थिए।
१ इतिहास २०:४-८
 फेरि पछिबाट पलिश्‍तीहरूसित गेजेरमा लडाइँ भयो। त्‍यस लडाइँमा हूशातीका सिब्‍बकैले एउटा सिप्‍पै नाम गरेको दैँत्‍यजस्‍तालाई मारे र पलिश्‍तीहरूको हार भयो। पलिश्‍तीहरूसित अर्को लडाइँ भयो। याईरको छोरो एल्‍हानानले गातका गोल्यतको भाइ लहमीलाई मारे। लहमीको भालाको डन्‍डा तानको डन्‍डाजत्तिकै मोटो थियो। अर्को लडाइँ गातमा भयो। त्‍यहाँ हात र खुट्टामा छ-छ वटा औँला भएको एउटा दैँत्‍यजस्‍तो मानिस थियो। त्‍यो प्राचीनकालका दैँत्‍यहरूजस्‍ताको सन्‍तान थियो। त्‍यसले इस्राएलीहरूलाई धम्‍की दियो र दाऊदको दाजु शिमेअको छोरो जोनाथनले त्‍यसलाई मारे। दाऊद र उनका मानिसहरूले मारेका यी तीन जना गातका रफाका दैँत्‍यहरूजस्‍ताका सन्‍तान थिए।
२ शमूएल 21:15-22
 पलिश्‍ती र इस्राएलीहरूका माझ अर्को एउटा लडाइँ भयो र दाऊद आफ्‍ना सैनिकहरूसित गएर पलिश्‍तीहरूसित लडे। त्‍यो लडाइँमा दाऊद साह्रै थाकेका थिए। इश्‍बीबनोब नाम गरेका हातमा साँढे तीन किलोग्राम वजन भएको काँसाको भाला लिएको र कम्‍मरमा नयाँ तरवार भिरेको रफाको एउटा सन्‍तान त्‍यहाँ थियो। त्‍यसले दाऊदलाई मार्ने विचार गर्‍यो। तर सरूयाहको छोरो अबीशै दाऊदलाई सहायता गर्न आए र त्‍यस पलिश्‍तीलाई हिर्काएर मारे। त्‍यसपछि दाऊदका मानिसहरूले “तपाईं नै इस्राएलको आशा हुनुहुन्‍छ” भनेर डराए र दाऊद तिनीहरूसँग लडाइँमा अब कहिल्‍यै जानेछैनन् भनी उनको सामु प्रतिज्ञा गरे। त्‍यसपछि पलिश्‍तीहरूसित गोबमा एउटा लडाइँ भयो। त्‍यस लडाइँमा हशातीका सिब्‍बकैले एक जना सफ नाम गरेको दैत्‍यजस्‍तोलाई मारे। गोबमा पलिश्‍तीहरूसित अर्को पनि एउटा लडाइँ भयो। त्‍यसमा बेथलेहेमका यारे-ओरगिमका छोरो एल्‍हानानले गातका गोल्यतलाई मारे। गोल्यतको भालाको डन्‍डा लुगा बुन्‍ने तानको डन्‍डा जत्तिकै मोटो थियो। त्‍यसपछि गातमा एउटा लडाइँ भयो। त्‍यसमा लडाइँ गर्न खुबै रुचाउने एउटा दैत्‍यजस्‍तो मानिस थियो। त्‍यसका दुई हात र दुई खुट्टामा छ-छ वटा औंलाहरू थिए। त्‍यसले इस्राएलीहरूलाई धम्‍की दियो र दाऊदका दाजु शिमाहको छोरो जोनाथनले त्‍यसलाई मारे। यी चार जना गातका दैत्‍यहरू जस्‍ताका सन्‍तान थिए अनि दाऊद र तिनका मानिसहरूले तिनीहरूलाई मारे।